Nakatona Ny Tranokalam-baovaon’ny Antoko Komonista Iray Ao Shina, Olona 20 Nosamborina Noho Ny Fitakiana Ny Fialan’i Xi Jinping · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2016 7:54 GMT
Wen Yunchao. Sary tao amin'ny Oniveristen'i Kolombia momba ny Fianarana ny Zon'olombelona.
Nisioka ilay mpikatroka Shinoa monina ao New York androany maraina fa nalain'ny manampahefan'ny tanibe Shinoa an-keriny ny fianakaviany tamin'ny 22 Martsa. Matahotra izy fa tazonin'ny manam-pahefana ny fianakaviany noho ilay taratasy misokatra mandrisika ny Filoha Shinoa Xi Jinping mba hametra-pialana.
Ny fianakaviako, ny ray aman-dreniko sy ny rahalahiko izay monina ao amin'ny Tanibe dia nalain'ny manampahefana Shinoa an-keriny, nanjavona izy ireo hatramin'ny Talata teo.
Nitatitra i Wen fa nanery azy hiaiky fa tafiditra tamin'ny fandefasana taratasy misokatra tamin'ny 4 Martsa 2016 ny manampahefana. Ny taratasy, izay navoakan'ny tranonkalam-baovao Watching na “Mijery” misampana ao amin'ny Antoko Komonista, dia voalaza fa nosoniavin'ireo “mpikambana mahatoky ao amin'ny Antoko Komonista.
Ny tranonkalam-baovao “Mijery” na Watching dia natsangana tamin'ny volana marsa ary nanatevin-daharana ny Vondrona Media SEEC (izay mitantana ny gazetiboky Caijing), sampana iray ao amin'ny Alibaba, e-varotra goavana iray, mampiroborobo ny tambajotra ara-barotra manerantanin'ny governemanta Shinoa manao hoe “Fehikibo [fifehezana] Iray, Lalana Iray”.
Pikantsary tao amin'ny Watching.cn.
Nanazava ny antsipirihan'ny toe-draharaha i Wen, fantatra koa amin'ny anarana hoe Bei Feng :
Nalaina an-keriny ary nanjavona ny ray aman-dreniko sy ny rahalahiko tamin'ny 22 Martsa. Nanohintohina ny fianakaviako ny manampahefana [Shinoa], mngataka amin'izy ireo mba hanery ahy hiaiky ny fandraisako anjara tamin'ny taratasy misokatra. Nilaza ry zareo fa fantatr'izy ireo fa tsy izaho no nanoratra ilay taratasy, saingy mino kosa izy ireo fa nanampy tamin'ny fampielezana izany aho. Tian'izy ireo hilaza amin'izy ireo izay nanoratra ny taratasy sy ny fomba nanomezan'ny olona ahy ny taratasy aho. [Raha miaiky aho] dia tsy tazonin'zy ireo ho tompon'andraikitra aho. Saingy tsy afaka hiaiky zavatra tsy nataoko aho.
Ray aman-drenin'i Wen Yunchao. Tao amin'ny Twitter.
Nitarika fisamborana olona roapolo ny taratasy misokatra, vehivavy mpiasa ao amin'ny Watching ny enina amin'izy ireo. Ny folo hafa kosa miasa ao amin'ny orinasan'ny teknolojia miara-miasa amin'ny tranonkala.
Tamin'ny 15 Martsa, nalain'ny manampahefana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Beijing i Jia Jia, mpanao gazety matihanina, fotoana fohy talohan'ny tokony hidirany tao amin'ny fiaramanidina ho any Hong Kong, izay nanasana azy handraisany fitenenana amin'ny lahadinika oniversite iray. Noheverina fa mifandray amin'ilay taratasy misokatra ny fanjavonany.
Tsikerain'ilay taratasy misokatra ny fanao ara-politika, ara-diplaomatika, ara-toekarena ary ara-kolontsainan'i Xi amin'ny “fialàna amin'ny rafitra demokratikan'ny fitantanana iombonana” ary milaza fa nitarika fivangongoam-pahefana “tafahoatra” sy fikorontanana eo amin'ny tsenan'ny petra-bola sy ny tsenan'ny fananana. Ho solon'izany, dia nitarika “fanjavonan'ny harenan’ ireo olo-tsotra an'hetsiny”. Nokendren'ny taratasy ihany koa ny hetsika “Lalana iray, Fifehezana iray”, mandresy lahatra fa mampiasa “tahirim-panakalozam-bola goavana dia goavana any amin'ny faritra sy firenena tratran'ny fisafotofotoana tsy misy tamberina.” Farany, ampangainy ny governemanta ankehitriny ho mametraka indray ny fanandratana olona malaza izay nanjaka tao Shina nandritra ny Revolsiona Ara-kolontsaina.
Na dia nipoitra nandritra ny adiny roa monja tao amin'ny “Mijery” aza ilay taratasy misokatra, dia hita ho fanoherana mivantana ny fitantanan'i Xi Jinping avy ao anatin'ny antoko izany. Tsy namoaka vaovao ôrizinaly ny tranonkalam-baovao hatramin'ny 15 Martsa ary hakatona atsy ho atsy. Nangatahana ireo mpiasa ao amin'ny tranonkala mba hametraka ny fialàn'izy ireo.
Nandrisika ny filoha Obama i Wen, izay mbola mitoetra ao New York mba hanampy hiaro amin'ny famotsorana ny fianakaviany rehefa mihaona amin'i Xi Jinping izy amin'ny herinandro ambony:
Filoha Obama @POTUS , Azafady angataho izy mba hamotsotra ny ray aman-dreniko sy ny rahalahiko, nalainy an-keriny izy ireo tamin'ny 22 Martsa